राज्य Duma के गर्छ? राज्य Duma सदस्य
रूसी संघ को राज्य Duma के गर्छ? यसको कार्य र जिम्मेवारी के हो? यी प्रश्नहरूको जवाफ लेख मा दिइनेछ।
आरएफ राज्य Duma: एक सामान्य सिंहावलोकन
राज्य Duma तल्लो छ संसद को कोठामा रूसी संघ वा रूसी संघ को संघीय सभा को। राज्य Duma, साथै संघ परिषद छ को विधानसभामा। एक रिपोर्ट 1993 मा आयोजित शरीर सिर्जना। उर्दी बी एन Eltsina "रूसी संघ को संवैधानिक सुधार" अनुसार, 450 प्रतिनिधि को शरीर मा देखियो। यो संख्या आधा एक राउन्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिनेछ। को मत एकल-सदस्य जिल्लामा ठाउँ लिन्छ। अन्य आधा 5-प्रतिशत सीमा हटाउन छन् रूसी राजनीतिक दलहरू मदत संग गठन गर्नुपर्छ।
संविधान को पाँचौ अध्याय रूसी राज्य Duma समर्पित। यसलाई त्यहाँ छोटकरीमा निकायको संरचना वर्णन छ, र पनि के रूसी संघ को राज्य Duma। देशको मौलिक व्यवस्था यस अध्याय के हो?
संविधान अध्याय 5
संघीय सभा - पाँचौं अध्याय देश को आधारभूत व्यवस्था रूसी संसद को कथा भन्छ छ। यस संघ परिषद र राज्य Duma: को अध्याय छोटकरीमा संसद दुई हाउस सम्बन्धी सबै मुख्य बुँदाहरू बाहिर spelled। को लेख 103 को जो यो राज्य Duma सदस्यहरू, र के शक्तिहरु तिनीहरूले अधिकार छ भन्दा पूर्णतया प्रकट गर्छ। राज्य Duma - यो जिम्मेवारी र संसद तल्लो घर को व्यावसायिक कार्य को सबै भन्दा पूर्ण तस्वीर छ गर्न disassembled पर्नेछ यो, साथै रूसी संविधान केही अन्य लेख छ।
यो तथापि, सबै भन्दा साधारण सुविधाहरू सुरु गर्नुपर्छ। यसरी, लेख 94 संघीय सभा को स्थिति स्थापना; यो शरीर विधायी शाखा सम्बन्धी प्रतिनिधि हो। लेख 95 को भाग5राज्य Duma प्रतिनिधि हुन् 450 व्यक्ति हुन्छन् भनेर स्थापित गरिएको छ। कला। 96 अब ठ्याक्कै5वर्ष छ अंग चुनाव अवधि, को कथा बताउँछ। कि बारे, के राज्य Duma, पछि छलफल गरिनेछ।
राज्य Duma र को सरकार
सबै भन्ने तथ्यलाई बावजुद शक्ति तीन शाखा रूस मा प्रत्येक अन्य बराबर हो, यो अर्को एक शाखा को एक महत्वपूर्ण प्रभाव संकेत केही अंक टिप्पण लायक छ। विशेष, यो संविधान को धारा 114 को भाग 1 ध्यान आवश्यक छ। यो लेख अनुसार, सरकार राज्य Duma गर्न समसामयिक प्रतिवेदन प्रदान गर्न बाध्य छ। यस्तो सिस्टम सधैं राज्य लोकतान्त्रिक विकास डिग्री संकेत गर्छ। विशेष मा, लेख 114 मा टिप्पणी मा सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा प्रतिनिधि शरीर को भूमिका अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता बुझाउँछ। दुर्भाग्यवश, मात्र राजनीतिज्ञ चेक र शेष को कुनै पनि यस्तै योजना उल्लङ्घन छैन भनेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। हामी पनि बारेमा अचम्मको निकट भविष्यमा संघीय सभा सरकार मूल्याङ्कन गर्न चाहे छ छ।
यो तथापि, फिर्ता के राज्य Duma जाने हुनुपर्दछ, र सरकार को सम्बन्ध मा यसको कार्य के हो। यसरी, लेख 103 को बिन्दु बी को कार्यकारी आत्मविश्वास मुद्दा सम्बोधन गर्न मौका राज्य Duma गर्न प्रदान। वास्तवमा, यो एक महत्वपूर्ण प्रभाव प्रतिनिधि कार्यकारी पावर को शाखा को एक थप प्रमाण हो।
राज्य Duma र रूसी संघ को केन्द्रीय बैंक
उच्च आर्थिक शरीर को सम्बन्ध मा रूसी राज्य Duma के गर्छ? रूसी संविधान को धारा 83 को अनुच्छेद डी राज्य Duma गर्न नियुक्त र रूस को केन्द्रीय बैंक को टाउको खारेज गर्न मौका प्रदान। केन्द्रीय बैंक को प्रतिनिधि को कार्यालय को अवधि संघीय व्यवस्था अनुसार निर्धारण गरिन्छ "रूसी संघ को केन्द्रीय बैंक मा।" यो पनि नियुक्ति र हटाउने कार्यालय देखि अन्तिम हुनेछ रूपमा यदि यो Duma प्रतिनिधि को बहुमत मतदान भएको थियो उल्लेख गर्नुपर्छ।
एउटै खाताहरूको च्याम्बर लागू हुन्छ। राज्य Duma यो शरीर को अध्यक्ष र यसको लेखा को संरचना रूपमा नियुक्त गर्न सक्षम छ। को नियुक्ति वा हटाउने को प्रश्न अनुसार उपलब्ध बजेट, कर, कर लगाउने काम संग निर्णय छ, र यति मा। डी
यो अन्तमा, संविधान को लेख 103 उल्लेख छ। यो लेखमा विधानसभामा तल्लो घर को अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सबै आधारभूत कर्तव्य र कार्यहरु enshrines छ। त्यहाँ प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ कि? राज्य Duma के गर्छ? (ग्रेड 4, साथै स्कूल पाठ्यक्रम केही उच्च चरण अक्सर यी मुद्दाहरूको छलफल समावेश, अधिक वयस्क उपकरण अधिकारीहरूले बारेमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा थाहा हुनुपर्छ)।
को विधानसभामा तल्लो घरको मानव अधिकार द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति नियुक्त गर्न र उहाँलाई खारेज गर्न सक्षम छ। यो प्रतिनिधि अगाडी आवश्यक उम्मेदवार राख्न सक्षम छन् कि टिप्पण लायक पनि छ।
उल्लेख लायक हुनेछ जो एक अलग मुद्दा, - क्षमादान को प्रश्न निर्णय गर्न राज्य Duma को क्षमता छ। के यो मामला मा स्थिति तल्लो घर लिन्छ छ, राज्य Duma के गरिरहेको छ? छोटकरीमा र स्पष्ट संविधान को धारा 103 को अनुच्छेद फा characterizes। उहाँलाई अनुसार, क्षमादान अपनाउने निर्णय संसदीय वोट को बहुमत भर्ती द्वारा हुन्छ। एक उर्दी क्षमादान हस्ताक्षर राज्य Duma को अध्यक्ष। आदेश को आधिकारिक प्रकाशन तीन दिन भित्र उत्पन्न हुनुपर्छ।
राज्य Duma र राष्ट्रपति
राज्य को सम्बन्ध हेड र रूस को राज्य Duma सबैभन्दा विशेष तरिका मा लाइन। तसर्थ, संविधान (बिन्दु बी) को लेखमा 103 अनुसार, विधानसभामा तल्लो घर राष्ट्रपति र दावा विरुद्ध आरोप अगाडि राख्न सक्षम छ। तिनीहरूले प्रतिनिधि को 2/3 वोट लागि recruited थिए यदि अभियोग मामला मा मात्र गरे हुन सक्छ। यो पनि शुल्क प्रतिबद्ध अध्यक्ष हुन् कि अपराधको वा अपराध गर्न एक विशिष्ट सन्दर्भ हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
राज्य Duma समीक्षाको लागि सर्वोच्च अदालतले एक शुल्क पठाउन हुनेछ। अदालत ठेस, राज्य को टाउको कार्यालय देखि निष्कासन रूपमा प्रश्न पाता भने।
कानून को ग्रहण लागि प्रक्रिया
शाखा भएकोले प्रश्न मा, विधानसभामा उल्लेख, के बन्द प्रश्नहरू तुरुन्तै छन् राज्य Duma र संघ परिषद। यी शरीर प्रकाशित र नियमहरू सम्पादन गर्नुहोस्, र यो मुख्य उद्देश्य आफ्नो छ। कसरी जान्छ विधायी प्रक्रिया? यो पछि व्याख्या गरिनेछ।
यस ग्रहण र कानुनको कार्यान्वयन लागि प्रक्रिया तीन अध्ययनहरू मा बाहिर छ। पहिलो पढाइ मस्यौदा निर्देशन छलफलको समावेश छ। व्यवस्था को initiator रिपोर्ट यसो भन्छ, विद्यार्थी टिप्पणी र बहस गर्न मौका छ। यदि व्यवस्था स्वीकृत छ, अर्को चरण। उहाँले व्यवस्था, र साना परिवर्तनहरू गर्न परिमार्जन बनाउन सुझाव। त्यसपछि प्रतिनिधि लागि वा व्यवस्था को ग्रहण विरुद्ध मतदान गर्न जो तेस्रो चरण, बित्दै। बहुमत द्वारा लागि मतदान भने परियोजना को परिणाम मात्र अपनाए गर्न सकिन्छ।
संघीय कानुनको विचार क्रम
राज्य Duma के गर्छ? कानून, नियम adopts, आफ्नो सम्पादक र डिजाइन संलग्न। यी सुविधाहरू कम घर को सबै तीन विशेष अध्ययनहरू मा स्थान लिन्छ। विधायी प्रक्रियाको फराकिलो बुझाइ छ गर्न, यो संघ परिषद परियोजनाहरू द्वारा विचार को लागि प्रक्रिया बारे कुरा गर्न पनि आवश्यक छ।
पाँच दिनको लागि राज्य Duma संसद को माथिल्लो घर छलफल गर्न कानून विकास गरे। रूसी संविधान को धारा 105 को भाग4संघ परिषद वा बिल विरुद्ध मत व्यवस्था गर्न बाध्य भएको एक प्रबन्ध समावेश छन्। यसरी, कानून को च्याम्बर को आधा सदस्यहरूको अनुमोदन को मामला मा सेना आउँछ। त्यहाँ व्यवस्था कार्य गर्न अर्को सम्भावना छ। यो अन्त गर्न, संघ परिषद 14 दिन (हामी बिल लागि वा विरुद्ध असफल मत बारेमा कुरा गर्दै छन्) को लागि पठाइएको परियोजना बेवास्ता गर्नुपर्छ। परियोजना अस्वीकार गरिएको छ भने, राज्य Duma एक conciliation आयोग, उच्च च्याम्बर को निषेध हटाउन प्रयास छ जो सिर्जना गर्नेछ।
संविधान को धारा 106
के व्यवस्था गर्ने विधानसभामा को उच्च कोठामा द्वारा अनिवार्य समीक्षा विषय हुनुपर्छ? रूसी संविधान को धारा 106 निम्न परियोजनाहरू स्थापना:
शुल्क र कर संघीय स्तरमा;
युद्ध र शान्ति प्रश्न;
पैसा को उत्सर्जन;
वित्तीय, क्रेडिट, मुद्रा र भन्सार विनियमन को मुद्दाहरू;
denunciation (समापन) वा ratification (अनुमोदन) अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका;
रूस राज्य सीमाना स्थिति र सुरक्षा बारेमा प्रश्नहरू।
त्यसैले, एक अपेक्षाकृत बन्द के राज्य Duma को एउटा प्रश्न बन्नेछ। अनुमोदन वा नियमहरू अस्वीकार, नियुक्त वा क्षमादान संग फिक्री केही व्यक्ति खारिज - रूस मा संसद को तल्लो हाउस द्वारा प्रदर्शन गर्दै छन् यी सबै र धेरै अन्य कार्यहरु। अर्को राज्य Duma भंग हुन सक्छ जब र कस्तो अवस्थामा विचार गर्नुपर्छ।
राज्य Duma को dissolution मा
राज्य Duma केही अवस्थामा भंग हुन सक्छ, प्रश्न 109, 111 र 117. ध्यान दिनुहोस् गर्न पहिलो कुरा मात्र राष्ट्रपति संसद तल्लो घर भंग गर्ने अधिकार छ जो को लेख मा संविधान छ। तथापि, अनुसार लेख 92 को अनुच्छेद3मा यस्तो अधिकार एक अनुहार हुन सक्दैन, राष्ट्रपति, वा अभिनय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकल्प।
हामी पनि रूसी संघ को राज्य Duma को dissolution को प्रक्रिया आवश्यक छ किन कुरा गर्नुपर्छ। वास्तवमा, यस्तो योजना कार्यकारी र सरकार को विधान शाखा बीच मतभेद हटाउन अन्तिम तरिका हो। त्यसैले, एकदम देश को राजनीतिक र सामाजिक जीवनको विकास बाधा सक्ने संघर्ष जोगिन गर्न, यो आवश्यक सम्बन्ध "रिसेट" को एक प्रकारको बनाउनु हो। अनुसार सबै संवैधानिक नियम वा जसबाट को द्वन्द्व अवस्था सुलझाने र समझौता फेला द्वारा थप विकासका लागि बाटो फर्श, सरकार वा राज्य Duma भंग संग एक समय तरिका मा राष्ट्रपति।
राज्य Duma को dissolution लागि मापदण्ड
पहिले नै माथि उल्लेख रूपमा, संसद तल्लो घर को dissolution लागि मापदण्ड र अवस्था लेख 111 र रूसी संविधान को 117 मा enshrined छन्। त्यसैले, लेख 111 को भाग4यसलाई तीन पटक प्रधानमन्त्री को पोस्ट लागि उम्मेदवारको अविश्वास व्यक्त हो भने राज्य Duma भंग हुन सक्छ भनी बताउँछ। जहाँ राज्य को टाउको स्वतन्त्र भएको Duma को वर्तमान संरचना भंग गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त र संसद तल्लो घरमा नयाँ चुनाव को लागि कल सक्षम छ यो छ।
दोस्रो मामला संवैधानिक लेख 117. मा enshrined छ अनुच्छेद3अनुसार, राज्य Duma सरकार विश्वस्त पटक-पटक अभिव्यक्ति घटनाको अध्यक्ष भंग भएको छ। त्यहाँ स्थापित छ र स्पष्ट म्याद - तीन महिना। राज्य Duma त्यहाँ झैँ धेरै समय वर्तमान सरकार संरचना को ग्रहण प्रतिबिम्बित।
जब राज्य Duma छैन भंग हुन सक्छ?
त्यहाँ राज्य Duma को dissolution को संभावना अस्वीकार धेरै परिस्थितिमा छन्। ती सबै संविधान को धारा 109 मा सूचीबद्ध छन्। ठ्याक्कै तपाईं मतलब के? राज्य Duma भने भंग हुन सक्छ:
यसको काम सुरुदेखि कम्तीमा एक वर्ष बितिसकेको छैन;
यदि राज्य Duma को incumbent आरोप ल्याए (तर संघ परिषद को सान्दर्भिक निर्णयहरू यस परिस्थितिमा ग्रहण भइसकेपछि) छन्;
आपतकालीन वा रूसी संघ शुरू मार्शल व्यवस्था को स्थिति;
यो छ महिना वा कम राष्ट्रपति अवधि को अन्त अघि छ।
राज्य Duma को संरचना
राज्य Duma के गर्छ? यो प्रश्नको जवाफ दिइएको थियो। तर, यो unsolved रहिरहे अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा: संसद को तल्लो हाउस को संरचना र संरचना।
सेप्टेम्बर 18, 2016 रूस मा राज्य Duma गर्न प्रतिनिधि को चुनाव सम्पन्न। अक्टोबर5सातौं दीक्षांत समारोह को अन्तिम संरचना गठन भएको थियो। को गुट "संयुक्त रूस" (EP) र रूसी राज्य परामर्शदाता पहिलो क्लास को एक सदस्य - उहाँले आफ्नो अध्यक्ष Vyacheslav Viktorovich Volodin भयो। कम्युनिस्ट पार्टी, को "उचित रूस" बाट उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टी देखि 39 सांसदहरु र 23 को अनुहार - 343 स्थानहरू EP, 42 को सदस्य द्वारा लिएको थियो।
तसर्थ, लेखमा हामी संसद तल्लो घर को संरचना, यसको संरचना, साथै के राज्य Duma के हो के प्रश्नहरूको जवाफ दिइएको छ। ग्रेड4(उत्तर र ओलम्पिक खेल गर्न प्रश्न, सामाजिक अध्ययन मा पाठ्यपुस्तकहरु) र उच्च विद्यालय कक्षाहरू रूसी संघ को राजनीतिक प्रणाली बारेमा प्रश्नहरू presuppose। यदि यो बारेमा केहि वयस्क थाहा छैन, समाज मा राजनीतिक संस्कृति को स्तर plummet गर्न सुरु हुनेछ। यो समस्या सबै प्रकारका entail हुनेछ। राजनीतिक प्रणाली बारे एक सामान्य विचार गर्न, यो संविधान मात्र एउटा पढ्ने पर्याप्त हुनेछ।
"भूमि व्यवस्थापन मा," संशोधन रूपमा 78-FZ
प्रतीक र स्कटल्याण्ड गान को झन्डा
आत्म-रक्षा को एक अतिरिक्त के हो? अपराधी कोड को लेख
सार्वजनिक स्थान: व्यवस्था गरेर परिभाषा
सही को परिभाषा - यो ... अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था को परिभाषा छ। मानव अधिकार
अलास्का झण्डा: इतिहास र विवरण। Benny बेन्सन - उत्तरी राज्य झण्डा को निर्माता
कसरी भन्दा साधारण भागहरु प्रयोग गरेर LEGO एक ट्यांक बनाउन
एक ग्रील्ड पनीर कसरी खाना पकाउनु?
"साना खाडी", Anapa (स्वास्थ्य): तस्बिर, संपर्क समीक्षा
छत संरचना: उपकरण विशेष विश्वसनीय छत
वर्णन, विशेषज्ञहरु र समीक्षा: Vavilov (रूस, सेन्ट पीटर्सबर्ग) मा Rodd
कद्दू संग Multivarka चिकन: सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु
पम्प दबाव घर लागि पानी बुस्टिङ: स्थापना
Brateevo मा दन्त चिकित्सा: चयन गर्न के?
बच्चा के रात, वान्ता?
अनवर: नाम मान, वर्ण र भाग्य
फर्नेस: भट्टियों को प्रकार, विशेष डिजाइन र संचालन